What to prepare to getafirst job for Fresh Graduate? ( Part-1) ﻿
What to prepare to getafirst job for Fresh Graduate? ( Part-1)
Fresh Graduate အတွက် Unemployment Rate က ၂၀၁၅ အရဆို ညိုလဲ့ ခန့်မှန်းရသလောက်ဆို နိုင်ငံရဲ 5% လောက်က Unemployment Rate ဖြစ်ပြီး အဲ့ထဲမှာလည်း Fresh Graduate လည်းပါတယ်။ နောက်ပြီး Company တော်တော်များများကလည်း Fresh Graduate ဆို အလုပ်ခန့်ဖို့က တော်တော်လေးစဉ်းစားယူကြတယ်။ ညိုလဲ့သိသလောက်ဆိုရင် Schindler, Telenor, Cocacola စတဲ့ ကုမ္ပဏီကပဲ Fresh Graduate တွေကို အလုပ်ခန့်ကြတာများတယ်။ Fresh Graduate တွေအနေနဲ့ အလုပ်ရှာဖွေရတာ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ မိမိမရဲ့ Career အတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို လျှောက်ဖို့ အလုပ်တစ်ခုကို ရအောင် ကြိုးစားပြီး မိမိဘက်က ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ အခု ညိုလဲ့တို့ရဲ့ website မှာဆို Entry Level အတွက် အလုပ်ပေါင်း ၁၂၀၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ Company ကြီးတွေက Fresh Graduate တွေအတွက် အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်း လူ၂၀၀ မှာ အယောက် ၂၀ လောက်ပဲ ရွေးတာမျိုး ဆိုတော့ Fresh Graduate တွေအတွက် က Competition အရမ်းကြီးတယ်။ အဲ့တော့ အလုပ်တစ်ခုကို ရရှိဖို့အတွက် Fresh Graduate တွေပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အရာတွေ ထားရှိရမယ့် Attitude တွေကို မချိုရီနဲ့ ဆွေးနွေးမှုအပိုင်း၁ ကို နားဆင်လိုက်ပါအုံးနော်။